Ungakuvimbela kanjani ukweba ekhaya lakho
1. Qikelela e-NightClose amawindi akho nezicabha, ukhiye umnyango wakho wezokuphepha ngaphakathi. Ikakhulu qiniseka ukuthi usuvele ukhiye amawindi akho e ...
1. Qaphela ubusuku bonke
Vala amawindi akho nezicabha, ukhiye wakhoukuvikeleka umnyango ngaphakathi. Ikakhulu qiniseka ukuthi usuvele uvalele amafasitela akho ekhishini lakho kanye ne-balcony. Uma kunamapayipi amanzi noma amapayipi egesi eduze kwamafasitela nangeminyango yakho, ungahlobisa kangcono amapayipi. Ukuvimbela amasela akhuphuke endlini yakho. Ungavuli amafasitela anamapayipi eduze kwawo ngobusuku behlobo. Beka izinto zakho ezibalulekile kude newindi.
2. Amathiphu wokuvimbela ukweba
Uma uphuma isikhashana, kuhle ngawe ukushiya ukukhanya noma ukuvula umsakazo wakho. Futhi uma ushiya ekhaya isikhathi eside, kuhlakaniphile ukubeka izicathulo emnyango wakho bese ubeka okuthile okulula ukwenza umsindo. Njengezinsimbi ze-aelian noma i-flowerpot. Musa ukushiya imali eningi ekhaya lakho. Izinto ezibalulekile, amakhadi wesikweletu kanye ne-ID ikhadi le-ID akufanele zihlanganiswe. Kufanele ungene kahle nomakhelwane bakho, bazise uma uzophuma. Futhi ngikhumbule abantu abasolisayo futhi bazise umakhelwane wakho.
3. Ezinye zezobuchwepheshe eziphakeme zokuvimbela ukweba
A. Faka umnyango we-auto arcal bell. Lapho umnyango wakho wephulwe amasela, uzobiza ifoni noma amaphoyisa.
B. Faka inzwa yewindi. Lapho iwindi livulwa ngaphandle, lizokwazisa futhi.
C. Faka inzwa ye-PIR eduze kwe-balcony kanye nemigwaqo.
D. Faka okunyeAmakhamera we-IP ukuze ukwaziGada ikhaya lakho.
4. Yini esingayenza lapho umgibeli esevele esekhaya lakho?
A.Angabi ukwethuka. Uma ungatholakalanga, vele uhlale uzolile futhi ushayele amaphoyisa. Shayela omakhelwane bakho uma kunesidingo. Uma umgibeli ekuthola, ungaze uyilwe naye. Yehlise umoya futhi uxoxisane naye. Anelise izidingo zakhe uma ungaqinile ngokwanele. Zivikele futhi ukhumbule ukubukeka kwakhe bese ubiza amaphoyisa.
B.Uma ufike ekhaya futhi uthole indlu yakho ihanjelwe amasela, ungahambi lutho kuze kube yilapho amaphoyisa ayihlole.
PHAMBI Umkhakha Wezokuphepha ube yinhlangano yobuhlakani bokufakelwa
Izizathu eziyishumi zokusebenzisa ikhamera ye-IP ekhaya lakho OLANDELAYO